शनिबार, फागुन ८, २०७७ रुपिन्द्र प्रभावी
पोखरा । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले शनिबार समसामयिक शैक्षिक सवालहरुमाथि प्रशिक्षण सम्पन्न गरेको छ ।सङ्गठनमा प्रचण्ड-नेपाल समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटका शिक्षकहरु आबद्ध छन् ।
सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले अबको शैक्षिक आन्दोलन नयाँ शिराबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । "नयाँ शैक्षिक ध्रुवीकरणका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक आन्दोलनलाई हामीले नयाँ नमुना पेस गर्नुपर्छ", अधिकारीले भने, "नयाँ ढङ्गको आन्दोलन गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन ।" उनले शैक्षिक आन्दोलनका लागि तयार रहन पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गरे ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), कास्कीका सचिव बखानसिंह तमु 'आभास'ले पार्टीले शिक्षकहरुका समस्यामाथि गम्भीर ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । शिक्षकहरुले पनि पार्टीलाई समयानुकूल आवश्यक सहयोग गर्न आह्वान गरे ।
सङ्गठनकै गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सोमनाथ ढुङ्गानाले शैक्षिक आन्दोलनलाई पुरानै ढङ्गबाट अघि बढाएर शिक्षकहरुका माग पूरा नहुने बताए । "आजसम्म शिक्षा ऐनसमेत जारी गर्न नसक्नु कहाँसम्मको गैरजिम्मेवारीपन हो ?" ढुङ्गानाले प्रश्न गरे । उनले प्रतिगमनका विरुद्ध सबै शिक्षकहरु एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए । पार्टीले के गर्‍यो र पार्टीलाई सहयोग गर्ने ? भन्ने प्रश्न गर्नुको कुनै तुक नरहने भन्दै प्रचण्ड-नेपाल पक्षको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले शिक्षकहरुको हरेक किसिमको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।
कास्की जिल्ला इन्चार्ज तथा गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष गोपालमणि लामिछानेले केन्द्रीय परिषद्को सर्कुलर वाचन गर्दै शिक्षकहरुको योगदानको उचित कदर हुनुपर्नेमा जोड दिए । सङ्गठनका कास्की जिल्ला अध्यक्ष तारानाथ पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय राहत विभागका संयोजक विष्णुप्रसाद भट्टराई, नेपाल शिक्षक महासङ्घकी केन्द्री सदस्य सम्झना कट्टेल, कास्कीका सहअध्यक्ष महेन्द्रमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेश महिला उपाध्यक्ष शोभा गुरुङलगायतले शिक्षकहरुलाई उचित सम्मान दिलाउनका लागि सङ्गठनले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
श्रीधर गिरीले स्वागत गरेका कार्यक्रमको सञ्चालन कास्की जिल्ला समन्वय समितिका सचिव प्रकाश रिजालले गरेका थिए ।
शनिबार, फागुन ८, २०७७, २२:४२:००
बुधबार, फागुन ५, २०७७ रुपिन्द्र प्रभावी
लमजुङमा हात्तीपाईले विरुद्धको औषधी खुवाउने अभियान सर्यो ११ मिनेट पहिले